भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा, यस्तो छ आकांक्षीको लर्को? – Hamro24News
भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा, यस्तो छ आकांक्षीको लर्को?
July 21, 2021 adminLeaveaComment on भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा, यस्तो छ आकांक्षीको लर्को?
६ साउन २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नु भएको छ ।
चार मन्त्रीकै भरमा सरकार चलाइरहँदा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा लाग्नु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवदी केन्द्रका अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल प्रचण्डबीच हिजो दुई पटक भेटवार्ता भएको थियो । एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास तिब्र छ । त्यो प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं पनि लाग्नु भएको छ भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सक्रिय हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ । त्यही अनुसार दलबीच भागबन्डाको तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
कांग्रेसले अब आफूले लिएका बाहेक चार मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । जसमा आफ्ना गुटकासँगै पौडेल पक्ष र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मिलाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ । देउवाले महाधिवेशनका आकंक्षीलाई मन्त्री बनाएर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ।
माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, अञ्जना विसङ्खे, सुरेशकुमार राई र शशी श्रेष्ठले दाबी गर्नु भएको छ ।
हाल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई–दुई जना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित अहिले मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय छ । संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइन्छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
दुःखद खबरः हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा ११ जना। को मृत्यु
सुत्नु अघि फोटो मा छोएर ॐ लेखी एक सेयर गर्नुहोस्, सात दिन भीत्र तपाईले सोचेको काम पुरा हुनेछ, हेर्नुहोस्